Trump inoda "kugura" internet pakusangana kwegandanga kuLondon metro nebhaketi mubhagi: Martin Vrijland
Kurwiswa kwegandanga muLondon pasi pevhu nebhechena muhomwe yeLidl, yakaisa simba guru pamakumbo ayo. Mukadzi pamufananidzo akakuvara zvakakomba uye pamwe naye 18 akakuvara zvachose akaendeswa kuchipatara. Iko inofanira kunge yaiva kuputika kukuru uye nerufaro kuti vashandi veku ambulensi vaiva nehukama hwakakwana navo. Zviri pachena kuti mudzidzi bhomba muiti mugove upenyu vakavhiringidzwa uye saka wehurumende Theresa May atozivisa Live ne mu pamutemo mashoko pamwe vakaurayiwa chiitiko. "Mafungiro angu anoenda kune vanhu vakakuvadzwa muParsons Green." Akaratidzawo kuonga kwaaiita mabasa ekukurumidzira anoti "zvakare zvakare inopindura nokukurumidza uye noushingi kumushumbidziro wechiitiko chegandanga."
Iwe unogona kuona chakaipa chinokonzerwa nebhakiti chakakonzera chitima chemasiti. Bhuku racho pachavo uye bhegi reLidl zvichiri kuoma, asi regai kukanganisa mukukuvadza kwakakonzerwa nevanhu vakadaro. Izvozvo zvinofanira kunge zvakave zvakanaka! Iwe unogona kuona izvozvi zvose zvinokanganisa pasi uye pamadziro uye pende yakadururwa kubva mukati mechitima yakagadzirirwa nehutu. ISIS haina kumborova zvakanyanya.
Vakadzi vari mumufananidzo uri pasi apa vane shungu kwazvo. Pano ivo vachangobva vataurirwa kuti bhegi ravo rebhuruu, iro rakanga riri pedyo nebhekiti, rakatorwa kuti riongorore. Mapurisa akafunga kuti izvi zvingangove zvekare iPhone 8 nekutarisana nemeso. Saka mapurisa anogona kutanga kuda kuziva kana mutambudzi anoonekwa pane izvi.
Pasi apa unogona kuona mifananidzo inotyisa nguva pfupi mushure mekurwa. Yambiro: mifananidzo haina kukodzera kuvaridzi vaduku kana vanhu vane chirwere chisina simba uye zvinogona kutungamirira kuwedzera kwemhirizhonga yeropa kana chirwere.
Mutungamiri weUSU, Donald Trump, akatsamwira chiitiko ichi muLondon pasi pevhu. "Mumwezve kurwiswa kwakaipa kwegandanga muLondon", akanyora pa Twitter. "Ava ndivo vanorwara uye vanochekwa-vanhu vakange vagara vane Scotland Yard mumufananidzo. Tinofanira kunge tishandura. "Trump akawedzera kuti mumaonero ake magandanga akadaro anofanira kutarisirwa nenzira yakaoma zvikuru. "Kuvharwa kwekupinda kweUnited States kunofanira kuva yakawanda, yakasimba uye yakanyanyisa. Asi, zvisinganzwisisiki, izvo hazvingave zvezvematongerwo enyika! "Trump zvakare yakaita se kukakavara kuti vanopisa simba vanofanira kurasikirwa nekusvika kwavo kune internet. "Inotaneti ndiyo inonyanya kukohwa. Tinofanira kuvhara izvozvo uye kuishandisa zviri nani. "
Kurasikirwa kwemagandanga kunofanira kutarisirwa nenzira yakaoma zvikuru.Internet ndiyo inonyanya kushandisa chikwata chatinofanira kutora uye chatinoshandisa zviri nani!
- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 September 2017
Inguva iyo munhu wese pakupedzisira anozoona kuti hapana 'mashoko enhema' anokonzerwa nemichina yakawanda uye kuti pfungwa yekuti kune hupenyu huripo husina maturo. Mifananidzo yawaona nguva ino yekurwiswa kwemazuva ano muLondon inofanira kunge yakakuvimbisa iwe ikozvino kuti kutya kwechokwadi. Saka iyo ndiyo nguva yakakwirira yokuti iwe unogamuchira kuti mapurisa akawanda uye ane simba anodiwa mumigwagwa; Panofanira kunge kune humwe hutungamiri pamusoro peinternet yose; rusununguko rwekutaura runofanira kungoenda uye iwe hausisina ruzha pamusoro pehutano hwako. Nyika yemapurisa inongova chinhu chakakosha!
NHEVHA: iyo fake nhau dzekuongorora panzvimbo yeMartin Vrijland
Kuzvidzivirira kunowedzera dambudziko kupfuura kuverenga kweChishanu pamusoro pezvinyorwa zvenhema
Mitsva inobudisa mutsva: Café Weltschmerz, The Post Online, Teerera Mari.
IAIVD yakagadzirisa matanho eEast German (DDR) Stasi muNetherlands here?
London Bridge Borough Market kudengenyeka kwegandanga. Dana mapurisa pamusoro pemashandisi akashandiswa!
Tags: 15, kurwisa, Bom, Donald kwehwamanda, bucket, Featured, Isis, london, Metro, Parsons Green, Gunyana, Theresa May, kumba
Zvechokwadi tiri kuenda kuona (greencreen screen?) Chekuchengetedza kamera mifananidzo (iyo iri mumagetsi ose ezvitima zvemasitadhi) uye mifananidzo kubva kumakera emasitroti emasitro. Ichi chaicho Chaicho! Hongu ... yakanga iri zvombo zvehondo, asi nditende kuti ichokwadi!
Nzira yekusika gandanga
Uye kune zvakawanda zvakawanda zvepurogiramu zvaungagona kuumba mifananidzo. Tinogona chaizvo kutaura kuti hatigone kuvimba nechimwe chinhu mune zvemashoko. Iyo firimu Wag the Dog haina chinhu.
Fred Emmer, aimbova munyori wenhau weNOS, akaunza nyaya kubva kumba kwake yakavakwa kare:
Izvo ndezvechokwadi bhokwe jokes.
Handisi kutumira vhidhiyo nokuti inonakidza nenzira, asi nokuti inosuruvara.
Kunyangwe, pane zvishoma zvakanaka, uye muviri muduku wechipfuti haugoni kukuvadza.
Mapurisa anoti kune waaishanda naye: "Nhasi hapana kumbova nehugandanga kurwisa purogiramu yacho?"
Kumbani: "Kwete, kwete nhasi, inofanira kunge iri jekisa risina maturo"
Zvinoshamisa kuti vanongovhura bhagi. Kazhinji, mumamiriro ezvinhu e'kushungurudza 'mabhegi / mapeji, nzvimbo yose inofanira kubviswa, uye basa rekubvisa mabhasi rinofanira kushandurwa.
Iwe unenge uchitanga kufunga kuti iyi muedzo kuti uone kuti hupenzi hunowedzera sei vanhu; rudzi rwekuongorora hypnosis.
"Zvakanaka guy script for the attack in London nhasi iri nyore. Tinoita bhati yepende muhomwe yeLidl uye tinokumbira chimwe chinhu kubva kuC30 crisis actors. Vose vanogamuchira bhonasi yakawedzera pamabhuku avo pamwe nevekupedzisira i-Phone X sekutenda. Uku kurwiswa kunobhadharwa neLidl, nekuda kwekutengeserana kwekutsvaga uye isu tichatsvitsa hurumende kutyisidzira. Chinangwa ndechekuongorora kana vanhu vachitenda vhidhiyo; kunyange kana zvisinganzwisisike. Zvadaro tinotaura kuti yakanga iri bhomba yemamiti uye kuti kurwisa kungave kwakanyanya kuipa. Tine boka reSCL rakagadzirira kuenzanisa nepine point precision izvo zvinoparidzirwa kumagariro evanhu. "
Zvishoma kuwedzera, ruzivo rweReuters / ANP rwakanga ruchizadza nhamba dzenziyo
Vakakuvara mushure mekunge kuputika kwepasi peLondon kwepasi, mapurisa anotora ugandanga
Yakabudiswa: 15 September 2017 09: 53
Zvechokwadi 22 vanhu vakakuvara musi weChishanu mangwanani mune kuputika muchitima chezvitima kuLondon. Vashandi vekuchengetedzwa kweBritain vakaona mamiriro ezvinhu sechiitiko chegandanga.
Musoro wekupokana kwehugandanga, Mark Rowley, vanoti hurumende inokonzerwa nekuputika kwezvakaitwa. Hapana wevakakuvadzwa iri mumamiriro ezvinhu akakomba kana kuti anotyisa. Vakawanda vanokuvadzwa vatsva, maererano naRowley.
Mapurisa eBritish akati musi weChishanu manheru kuti kuwanikwa kwemuiti wezvakaipa kana vatadzi vanoita zvakakosha zvikuru. Agent ave achioneka zvakajeka mumigwagwa kubvira pakaputika, achirega maLondon mauto edzimba achiziva pa Twitter.
Kunenge 9.20 (11) nguva yeDutch nguva iyo kuputika kwakashushwa pachiteshi chemasitadhi cheParsons Green kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweLondon. Nhengo dzebasa rekuburitsa mabhomba uye sangano rinopesana nehugandanga remapurisa riri panzvimbo, asi kwenguva iyo kuongorora kuchiri kuitwa nemapurisa ekutakura.
Ndinokurudzira zvikuru nhamba ye33 ... ine Scotch uye cigarre zvichida?
Iyo mibairo pamusoro "haisati yaenda zvachose kuputika" inonakidza zvikuru ... saka kuputika kunobva kwaenda uye kunokonzera motoball .. asi yakanga isina kupera zvachose. Izvozvo zvinoshanda sei "hazvisi zvachose"?
Kokojeni yakanyanya kuduku? Ko bhagi reLidl rakanga risina kuvharwa zvakanaka here? Ko pani yepende yakanga isina yakasimba here? Kwakanga kunewo karikiti kaduku here?
« Arjan Bos kubva kuNyika Matters akawirwa zvachose kuburikidza nebhasikiti inokurumidza kuita video
Iyo itsva cabinet (retteketet) inopa dzidzo yemamiriyoni e270 (kufara) »
Total Visits: 1.215.555
Abderrazak Samir op Coronavirus, Q Anon, Trump, Bolsonaro, BoJo, kudzika kwakadzika uye internet shutdown musi waApril 1?
Martin Vrijland op Vari varume vanoita zvechisikana ndivo mainini chinangwa cheiyo coronavirus? Hwaro hwesainzi
Killumimati 777 op Coronavirus, Q Anon, Trump, Bolsonaro, BoJo, kudzika kwakadzika uye internet shutdown musi waApril 1?
Marcos op Coronavirus, Q Anon, Trump, Bolsonaro, BoJo, kudzika kwakadzika uye internet shutdown musi waApril 1?